Ikhasi lezaluleko zabazali
Kungabukeka njengokuthi bekuyimizuzwana nje eyi-5 eyedlulile lapho kade umsiza khona ecathula, manje ke njengabo bonke abazali kungenzeka uyazibuza ukuthi isiphi isikhathi esifanele sokuthi ukhulume nendodakazi yakho mayelana nokuthomba kanye nokungena esikhathini.
Uchaza kanjani ngokuya esikhathini kwindodakazi yakho, kubuyela emuva lapho kuba kuwena ukuthi ukwenze kwaba lula kanjani ukuthi nikhulume ngalesi sihloko nendodakazi yakho, kepha ke thina sikwenzele kwalula kulesi sigaba esigcwele ulwazi kanye nezaluleko kanye nezinsiz. Kungenzeka ukuthi ufisa ukumkhombisa uhla lwethu lwabasakhula lokhu okwenzelwe amantombazanyana amancane.
Ushintsho Abhekene nalo
Ukuba owesifazane ngeke kwaba umsebenzi olula, kepha ungayisiza indodakazi yakho ibhekane nalesi sikhathi esinzima
Ukukhuluma ngokuya esikhathini
Ulwazi lunamandla/lubalulekile, ngakho ukukhuluma ngokuba sesikhathini kwendodakazi yakho kungamnika ukuzethemba okukhulu.
Othisha bangadlal indima enkulu okanye ebalulekile ekufundiseni abasakhula mayelana noku sesikhathini.
Imibuzo Ehamba phambili evamise ukubuzwa amantombazane okwaziwa ngama FAQS
Eminye yemibuzo ijwayelekile uma uyiqhathanisa neminye-nansi imibuzo ehamba phambili ekubuzweni abasakhula.
IZINHLOBO ZETHU EZISANSOMI
Thina kwa Lil-lets siyakuqonda ukuthi amantombazanyana anemizinjana emincane azoba nezidingo zawo, yingakho izinhlobo zethu ezincane ezisansomi ezaziwa ngama- Lil-lets mini Purple Range zidalwe zamfishane futhi zaqoqeka ukuze zilingane kahle, zenzelwa wena.